Uhlolo olubanzi olunzulu lwe-Testosterone Cypionate | AASraw
/Blog/Ithala/Uhlolo olusisiseko olunzulu lwe-Testosterone Cypionate
ezaposwa ngomhla 11 / 19 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Ehlabathini apho i-steroids ibe yinto-nto kwaye wonke umntu owenzayo ukufezekisa iinjongo zomzimba, kukho isidingo sokuba ufunde kabanzi nge-Testosterone Cypionate. Siza kuxubusha iinkcukacha ezininzi malunga nale steroid ukusuka kwi-Testosterone dosage, indlela yokufaka i-testosterone, indlela yokujongana nokugqithisa kweTesttosterone, ukuhlolwa kwee-Testosterone Cypionate kwabanye. Konke okufuneka ukwenze ukuhlala phantsi njengoko sifika kwi-Testosterone Cypionate.
Ndibuza malunga nesayithi efanelekileyo uthenge iTytosterone Cypionate online? I-AASraw.com yinto ekhethekileyo. Siyi-ishishini eliseChina elisekelwe ngokukodwa ekuveliseni, ekuthengiseni nasekuhanjisweni kweemveliso ezichaphazelekayo kunye neemveliso eziquka i-testosterone Cypionate.
Ngoko yintoni i-testosterone cypionate?
testosterone i-anabolic steroid eyayiyinto yokuqala yokuqulunqwa kwimarike. Ngakolunye uhlangothi, i-Testosterone Cypionate yinkomfa yeT Testosterone eyenza ngokukhawuleza, i-long-ester ne-oil-based injectable. Isetyenziselwa ukunyanga i-hypogonadism engenako kwi-Testosterone emzimbeni obangela iingxaki ezahlukahlukeneyo ezinxulumene namadoda.
Ukuba ngumuthi weziyobisi, unokukwazi ukuzinikela ekuthuthukisweni kwendlu yakho emva kokuba ugqirha ekuxelele ukuba ungakwenza njani. Ngenhlanhla i-self-injection, kwaye oku kwenza kube lula ukuyisebenzisa. Kwakhona ifumaneka kwifomu yayo yohlobo.
testosterone Kwakhiwa kuqala kwi-1935, kwaye emva kweminyaka emibini ikhutshwe kwiimarike njengeziyobisi zonyango. Ekuqaleni, yayifumaneka kwifelets fomu kwaye kamva yayifom ye-ester into eyenza isilathisi se-intramuscular njenge Testosterone Cypionate.
I-Methyltestosterone, enye ye-anabolic steroids yokuqala yokudibanisa ikhishwe kwi-1935. Ngelishwa, idibene ne-hepatotoxicity, kwaye ngenxa yoko, yaphela. I-testosterone esele isebenza ixesha elide i-testosterone Cypionate yaziswa kwiimarike phakathi kwe-1950s yinkampani ebizwa ngo-Upjohn. Ekuqaleni yayithengiswa phantsi kwegama leDepo-Testosterone kwaye lisasaziwa ngegama elifanayo.
U-Upjohn uye wabandakanyeka kwimveliso yeDepo-Testosterone kule minyaka edlulileyo kwiminyaka engamashumi amahlanu ukususela ekuqaleni. I-Testosterone Cypionate ikhethwa ukuba i-Testosterone enanthate yi-bodybuilders kunye nabadlali. Ezi zimbini zifana, kodwa i-half-life-life yazo ihlukile.
I-Testosterone Cypionate yayiphakathi kwe-anabolic steroids eyayifumana imvume yokuba isetyenziswe njengesichengiso sezonyango kwi-1970s. Kwaye kwacaciswa ngoko-FDA ukuba isetyenziswe kuphela kwi-Testosterone yonyango. Kule minyaka, ukusetyenziswa kwayo kuye kwavalwa ngenxa yokuba akufanelekanga ukusetyenziswa kwabantwana nakwabasetyhini. I-testosterone cypionate iye yadluliselwa njengezidakamizwa zokuzalwa kwezilwanyana xa zithathwa kwi-dose ye-200mg yeveki nganye.
Yintoni i-testosterone cypionate esetyenziselwa yona?
Testosterone Cypionate inezinto ezininzi ezisetyenziswayo ebomini bethu. Nazi izicelo.
Kwihlabathi lempilo, umntu uhlala ezama ukulungele ukuhamba phambili. Ingaba ungumthwalo we-weightlifter okanye umdlali wezemidlalo, uya kuqonda ukuba ngamanye amaxesha ukhuphiswano lunokuba lukhuni. Ngaphandle kokwaneliseka okuza kukuphumelela, ukunikezelwa kwemali okanye ukufumana indawo kwiqela elinobugcisa yinto enqwenela kakhulu ininzi kubo. Ukufumana oko kufezekiswa ebomini bakho kunokuthatha iminyaka elishumi okanye ngaphezulu kuxhomekeke kumzimba wakho. Kodwa iindaba ezilungileyo yisistim sokunyusa ukusebenza njengesiTytosterone Cypionate inokukwenza ukuba ufezekise iinjongo zakho zempilo.
Ngoko kutheni le mayeza enomdla kakhulu? Benza izihlunu zikhudlwana kwaye ngexesha elifanayo kukubuyisela ngokukhawuleza ekusebenzeni kanzima ngokunciphisa inani lomonakalo wamascle okwenzeka ngexesha leeseshoni. Inzuzo kule nto kukuba abagijimi banokuqeqesha ngokukhawuleza kwaye rhoqo ngaphandle kokuqeqesha.
I-Testosterone Cypionate inceda ekugcineni umgangatho wemisipha kunye namandla. Kwakhona kugcina amandla kunye nexinano. Enye into ebalulekileyo kukuba uya kuhlala ulangazelela iseshoni zoqeqesho lwakho ekubeni eli liza liza kuphucula kwaye likhuthaze umsebenzi wakho.
I-Testosterone Cypionate ikhuthaza ukulahlekelwa yintsizi ngokuphucula ukusetyenziswa komzimba. Le steroid iyakwazi ukwenza oku ngokubophelela kwi-androgen receptor ngokukhawuleza kubangele ukuphuka kwamafutha kunye nokukhusela ukubunjwa kwamaseli amatsha.
Kwakhona kuphucula ukwenziwa komsoco emzimbeni. Yakha imisipha ngokukhawuleza ngoko ukutya okudlayo kukusetyenziswa kusetyenziswa ukuhlakulela imizimba emininzi kunokuba igcinwe njengamafutha.
I-Testosterone Cypionate isetyenziswe kwi-androgen. Okwangoku, ivunyiwe ngu-FDA yokonyango lwe-hypogonadotropic kunye ne-hypogonadism ephambili (enokufunyanwa okanye enokuzalwa). Le meko yintlupheko apho amadoda angakwazi ukuvelisa i-hormone ye-Testosterone. Uthini umahluko phakathi kwababini?
I-Hypogonadotropic hypogonadism- Iyenzeka xa ezinye iinxalenye zeengqondo (i-pituitary gland okanye i-hypothalamus) edibanisa namathambo ngexesha lokuvelisa i-testosterone lonakaliswe.
I-hypogonadism yeprayimari- Kwenzeka xa amathambo angakwazi ukuvelisa i-testosterone eyaneleyo.
Xa umntu ehlupheka ngenxa yalokhu uhamba; i-sex drive ephantsi, i-erectile dysfunction (iingxaki zokufumana nokugcina i-erection), ukuxinwa kweengxaki kunye nokuguquka kwemizwelo. Kwakhona kunokukhokelela ekuphefumuleni i-anemia, ukulahlekelwa kweenwele zomzimba kunye neenwele zomzimba, i-gynecomastia (ukuphuhliswa kwebele) kunye nokunciphisa ukukhula kwamathambo kunye ne-penis. Nangona kunjalo, ukhuseleko lwayo ekuphatheni i-hypogonadism ekuhambeni kwexesha ekuhambeni kwexesha kumadoda akakaqinisekiswa.
Ukongezelela koko, isetyenziselwa ukunyanga i-osteoporosis, i-hormone yonyango ekutshintsheni kwi-transgender eyindoda, i-oligospermia (ibe nesibalo esiphezulu se-sperm), ilibazisekile ukukhulelwa komntu, ukuphazamiseka kwebele, kunye nomhlaza wesifuba.
I-Testosterone Cypionate enye ye-androgens enokugqibela echaphazelekayo ekukhuleni kwamalungu esini zesini. Kwakhona kunceda ekulondolozeni iimpawu zesini zesibini. Ziquka ukunikwa kweoli, utshintsho emzimbeni womzimba, intambo yezwi, ukukhulisa i-laryngeal, kunye nokukhula kweprotate nokukhula.
Esi sichazi sinempahla efanayo kunye neTesttosterone, kodwa inzuzo kukuba inomdla wokugqibela kunye nokukhululwa kwezinga. Kwiiyure ze-24 zolawulo lwazo, kwandisa izinga le testosterone ukuya kwi-400%. Amanqanaba e-androgen ahlala aphezulu kwiintsuku ezintathu ukuya kwiintsuku ezilandelayo emva kokulawulwa kwawo. Xa sele kukho ukulawulwa kwe-intramuscular yile myeza, kunokubangela ukuvuvukala kwendawo kunye nokuguquka kwe-libido kunye nomoya.
I-Testosterone Cypionate isebenza ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Iyokuqala ngukuguqulwa kwi-estradiol emva kokusebenza kwamamkeli atrogen. Ikwasebenza ngokusetyenziswa kwe-androgen receptor.
Yona i-anabolic eqinisekisiwe yinto enqabileyo kakhulu kumafutha. I-Testosterone kunye nee-esters zayo kufuneka zilawulwe ngejoza kuba zingasetyenziswa ngokukhawuleza ngesibindi xa zinikwe ngomlomo.
Kanye xa kukho ukulawulwa kwezidakamizwa, le nkunkuma ihamba nge-1 L / kg.
Xa kuthatha umonakalo, le nkunkuma iyangena kwi-circulation blood. Emva kokuguqulwa, i-40% yayo ibophezela kwi-globulin ye-plasma ngelixa i-2% yayo ishiywe ingabonakali okanye iqhotyoshelwe kwezinye iiprotheni ezibandakanya i-albin.
Ukuze eli liyeza liqalise ukusebenza, kufuneka liqhutywe li-enzymes. Umsebenzi we-catalyst ukuphula umxakano phakathi kweTesttosterone kunye nenxenye yesterta yeli molecule. I-Testosterone Cypionate inexesha elide lokucwangcisa ngenxa yobukhulu bayo bester. Xa ukuhlukana kwenzeka, i-testosterone idilizwe kwi-17 ketosteroids. Yenziwe ngeendlela ezimbini, ezingafani neendlela. I-Dihydrotestosterone kunye ne-estradiol yizona zixhobo eziphambili ze-metabolites. I-Testosterone idilizwe phantsi kwi-DHT kwipatro ye-urrogen, isibindi kunye nesikhumba. I-Dihydrotestosterone iqhutywe kwakhona kwaye i-androstanediol.
I-90% ye-testosterone umthamo owenziwe nge-intramuscularly isuswa kumchamo ngendlela ye-glucuronic, i-testosterone's sulfuric acid kunye ne-metabolites yayo. I-6% ye-testosterone esele isuswe ngamafeshe ngokuqhelekileyo kwifom engaxulwanga.
I-Testosterone Cypionate isiqingatha-ubomi ngumnye wezona zide kunokuba zisondele iintsuku ezisibhozo.
Izinto eziphambili ze testosterone cypionate
I-Testosterone Cypionate isetyenziswe ekuphatheni imiqondiso ye-hypogonadism kubantu. Le meko iveliswa ngumzimba ukungakwazi ukuvelisa i-hormone ye-testosterone.
I-Testosterone Cypionate ifumaneka ngendlela yesisombululo esinojojo. Kufuneka ilawulwe kwi-muscle, kwaye into efanelekileyo kakhulu yinto yokuba unokukwazi ukuyenza ngokwakho kwintuthuzelo yakho ekhaya emva kokuxoxa ngendlela yokwenza ngayo nodokotela wakho.
Isisombululo seTesttosterone Cypionate sinikwa njengesiza esichaphazelekayo kunye negama legama lomhlaza. Igama lophawu lohlobo lweDepo-testosterone.
Impembelelo ye-testosterone cypionate yokwakha umzimba
Nabani oye wasebenzisa i-Testosterone Cypionate unokufakazela iziphumo ezimnandi ezinika umzimba. Amandla ayo enze ukuba kuthathelwe ingqalelo njenge-top steroids kwimarike. Ukongezelela, inikeza iziphumo ezikhawulezayo kunye ezimangalisayo.
Emva kokuba usebenzise iiveki ezilishumi elinesibini, uya kuba;
Ukwanda kwenkunkuma yexabiso. Kungenxa yokunciphisa i-estrogen.
Ilungisa izihlunu ngokukhawuleza ngokuphakamisa umsebenzi weselferenethi.
Ngokugcinwa kwe-nitrogen, kukunika inzuzo enkulu yokuxhamla imisipha.
I-Testosterone Cypionate iyakwandisa amandla akho.
Kwakhona, i-Testosterone ivimbela umphumo wamanye ama-hormone anokubangela ukulahleka kwe-muscle ngexesha lesigaba sokusika.
Impembelelo yecala le testosterone cypionate
Okumangalisa kukuba, le mayeza ayibangeli ubuthongo. Nangona unokubandezeleka ngenxa yeempembelelo zeComptosterone Cypionate, iindaba ezilungileyo kukuba zilawulwa.
I-Acne- Ukusetyenziswa kweTestosterone Cypionate ingabangela izibhobho. Kungenokuba yingxaki, kodwa uya kuthandana nelokuba unyango olusebenzayo lukhoyo. Izifo zonyango ezifana ne-glycolic acid, i-benzoyl peroxide, kunye ne-salicylic acid yona nto ifanelekileyo kunyango lwe-acne elula. Kufuneka ugcine ukucoceka komzimba kunye neendlela zokufumana ulusu olucacileyo.
Ukukhula kweenwele- Le nyanga inokubangela ukukhula kweenwele kwiindawo ezingalindelekanga. Ukuba unobungozi obunzima okanye ubunwele bentloko, kukho iindlela zokunciphisa oko. Iyokuqala kukuhlamba usebenzisa umthunzi wombane okanye i-razor. Ukuba ukucheba kudla kukunika i-razor, usenokucinga ukuthenga ukhilimu ocolileyo.
Unokuphinda udibanise okanye uthintele ukucima iinwele kwiingcambu. Ukugxotha enye indlela esheshayo yokukrazula iinwele kwiingcambu. Ukusetyenziswa kweekhemikhali ezinamandla ezibizwa ngokuba yi-depilatories kunokukunceda kakhulu, kodwa ukuba unesikhumba esikhathazekile, kufuneka uqale uvavanye kwindawo encinane. Ezinye iindlela zokumelana neenwele ezigqithiseleyo zingokusetyenziswa kwamachiza, ukususwa kweenwele ze-laser kunye ne-electrolysis.
Ukuvuvukala kunye nentlungu kwi-site injection- Akunakuze udideke ngenxa yokuba uvezele ubunzima okanye ukuvuvukala kwisayithi yokujova. Ukuba ubenokudutshulwa ngaphambili, usenokuba utshilo ukuba ubuhlungu buqhelekileyo ukuba buhlala iintsuku ezimbalwa. Ukunciphisa oku, qiniseka ukuba uhambisa indawo ejoyiweyo. Ukuba uhlala ungenasiphako, ummandla ungalimaza ngakumbi. Ukwenza ukuba intlungu ilawulwe, unokucinga ukuba uthatha intlungu ekuncedeni ukunceda intlungu kunye nokuvuvukala. Enye indlela ebalulekileyo yokujongana nale nto ngokuguqula ipakethe elifudumeleyo kwinqanaba elityhulwayo. Kodwa ke kufuneka ukhangele ugqirha xa uqaphela ukuba intlungu okanye ukuvuvukala akusikho inkxaso kwiiyure ze-48.
I-Gynecomastia (ukukhulisa isifuba) -Ungabona ukuba isifuba sakho siya kuba sikhulu emva kokusebenzisa le mayeza. Oku akufanele kukukhathaze kakhulu; la macebiso alandelayo aya kuza. Owokuqala usebenzisa iikati zokunyanzelisa. Kukhethwa ngokukhethekileyo kuba kulula kwi-wallet kwaye kunciphisa ukubonakala kwebele. Ungaphinda uzame ezinye ze-gynecomastia zokuqeqeshwa njenge-high-intensity training interval (HIIT), i-push-ups, i-dumbbell incline press, kunye nomgca wokuhlala. Ukunciphisa ukubonakala kwesifuba sokuvuvukala, kufuneka usebenze nzima ukwenza imisipha. Kuya kwenza ukuba amabele amakhulu abonakale engaphantsi. Kwaye ngenxa yokuba iinqatha zikhuthaza ukuthukuthela, kufuneka ugweme ukutya okunamafutha kwaye udle amafutha enempilo afana namajikijolo, imifuno eluhlaza, iintlanzi ezinamanci kunye namazambane. Enye indlela yokunqanda i-gynecomastia kukufumana utyando oluya kususa amafutha kwindawo yebele.
Ukuchithwa okuqhelekileyo- Ukuba ukhetho luqhelekile kodwa ukuba umntu ongazifunayo unokuba ngumonakalo. Akufanele kukuyeke ukusebenzisa iTytosterone Cypionate. Unokuhlala uhlangabezana naluphi na ulungiso olungavumelekanga oluza ngendlela yakho. Okwangoku uyazibuza malunga nendlela yokwenza ngayo. Xa kwenzeka oko, akufanele uve ngathi ihlabathi lichithwa kuwe; uhlale phantsi, uphefumle kwaye uhlale uzolile. Ukunciphisa intloni ezayo kunye nayo, unokufakela ukulungiswa usebenzisa i-laptop, i shirt okanye ibhatyi. Akukho mfuneko yokukhathazeka, wonke umntu ufumana oku kwaye mhlawumbi akukho mntu waphawula ukuba unalo. Ungacamngca, uzame kwaye uphazamise, uthathe ishafu ebandayo, ube nokuhlamba okufudumele okanye ube nokuzilolonga okunene njengokuhamba. Nangona kunjalo kunconywa ukuba ukuba i-erections ibuhlungu, kufuneka ufune ugqirha.
Izilungiso ezihlala ixesha elide kunexesha eliqhelekileyo- Ulungiso oluhlala iiyure ezine okanye ngaphezulu alukho ngaphezulu. I-Testosterone Cypionate inokubangela oku, kwaye unokujamelana nale nto ngokubeka iipakethi ze-ice endaweni. Ngaloo ndlela, ulungiso oluqinileyo lunokuhamba ngomzuzu. Ugqirha unokukunika iipilisi okanye iisisiti zokujongana nazo.
Intloko- Inwele yentloko ingenziwa ngokusetyenziswa kweTestosterone Cypionate. Kungenokuba nzima ukusebenza, ukuqhuba okanye ukuqhuba intetho ngeentlungu zakho kodwa unokwenza okungaphezulu kokuhlala embhedeni kwaye ulindele ukuba uhambe ngokwakho. Unokuzama ukuthabatha i-aspirin, i-naproxen, ibuprofen kunye ne-acetaminophen. Ungasebenzisa kwakhona iingcebiso ezilandelayo ukujamelana nentlungu. Vala amehlo akho uze uphumle. Unokuzihlalisa iintempile zakho nentamo yakho. Kukwacetyiswa ukuba ukhululeke kwaye uzame ukubeka ilinen elifudumeleyo okanye ukufudumeza ukujikeleza malunga nesiseko sekhanga kunye nentamo yentamo. Funa uncedo lwezonyango ukuba intlungu iqhubeka.
Ukuguquguquka kwemizwelo- Ngamanye amaxesha unokuvakalelwa ukuba ufuna ukuchitha usuku lwakho lunye ngelixa uhlala kwezinye iintsuku, unokuziva uvuyiswa. Kuyinto eqhelekileyo nje ngokuba ayichaphazeli imisebenzi yakho yemihla ngemihla. Ngakolunye uhlangothi, utshintsho olubi kakhulu lube luphawu lokuba into ayilungile. I-Testosterone inokubangela oku kwaye ukuba yenza ntoni, ukujongana nayo yintambo. Ukuba usebenzise rhoqo, uya kuphawula ukuba ukwenza oko kukuphakamisa umva wakho ngokukhawuleza. Ukutya ukutya okunempilo akubalulekanga kuphela kwimpilo yakho yempilo, kodwa kunceda ekuphuculeni isimo sakho sengqondo. Uya kufuneka kwakhona uhlaziye ngokuthatha inxaxheba ekukhuliseni izinto ezifana nokucamngca kunye ne yoga. Buza udokotela ukuba uvakalelwa kukuba uguquko lwenu luya kuthatha ubomi bakho.
Ukunciphisa isibalo sesidoda somntu xa isilwanyana sisetyenziswe kumaqondo aphezulu- Ukuba unengxaki yokufumana umlingani wakho okhulelwe ngenxa yokusetyenziswa kweTestrostoneone Cypionate ungafumana unyango lwe-hormone kunye nemichiza ukulungisa oku. Ngaphandle koko ungasebenzisa kwakhona inqubo yobugcisa bokuzala (ART) inkqubo. Ukuba unyango lubonakala lulize, unako ukwandisa inani lexesha olala ngesondo okanye ulala ngesondo xa kwenzeka ukuchumisa. Ukuphepha iibluegrants ezinokuthintela ukunyakaza kwesisu kuyindlela efanelekileyo yokulawula oku.
Ukuba zonke ezi ziphumo zempembelelo zincinci, ke kulindeleke ukuba zihambe ngokwazo emva kweentsuku okanye iiveki ezimbalwa. Ukuba kungenzeki, xela kumakhomistiki okanye ugqirha.
Le yimiphumo emibi ekufuneka ithathwe ngokungathí sina. Emva kokuba uqaphele nayiphi na le mpawu, fownela ugqirha wakho kwangoko. Cela uncedo olukhawulezileyo xa uvakalelwa ukuba iimpawu ziyazisongela ubomi kwaye ukuba ucinga ukuba ziyingozi yonyango. Nazi iziphumo ezibi kunye neempawu omele uzikhange;
Ukuhlaselwa kwintliziyo- Ukuze ukwazi ukuba unentlungu, unokubona ukuba unalezi zilandelayo; ukungahambi kakuhle emzimbeni wakho ophezulu, ukuphefumla okufutshane kunye nentlungu yesifuba.
Ukwandisa ubungakanani be-prostate ubungqingili. Kuphawulekayo; ukungakwazi ukukhupha i-bladder, ukuxhatshaza ngexesha ufuna ukuvuthwa, unomtsalane obuthakathaka umchamo okanye umntu okhuphayo kwaye abuyele inkxalabo ekuqalekeni. Esinye isibonakaliso si-nocturia (uvakalelo lokuvuthwa ngaphezulu ebusuku) kunye nexesha elikhawulezayo kunye nexesha elifunekayo lokuvota.
I-Stroke- Intetho edibeneyo ingayibonakalisa kwaye ibuthathaka emacaleni omzimba.
Umhlaza wesifo seprotate- Ugqirha kufuneka ahlole naluphi na iingxaki zesifo seprotate phambi kwexesha kunye nangexesha lotyando nge Testosterone Cypionate ngakumbi ukuba uneminyaka engamashumi mathandathu anesihlanu okanye ngaphezulu.
Iingxaki zesibindi- Kungabonakaliswa ngotshani lwamehlo okanye ulusu, olunomchamo omnyama, ukulahleka kwesidlo, ukukhathala okungavamile, isikhala esinemibala emhlophe, ukufumana imivimbo elula kunokuqhelekileyo kunye nokuvuvukala kweenyawo kunye nemilenze. Ungaphinda ufumane ukuvuvukala kwesisu kunye nentlungu, ukuhlanza kunye nesicefe.
I-Polycythemia- Oku kukunyuka kwi-cell red count count. Imiqondiso yayo; ukunciphisa ukuphazamiseka kwengqondo, ukukhathala, iimbozi zegazi, ukubetha, ukudideka, iintloko kunye nokubuyiselwa ubuso.
Ukubambisana kwePulmonary- Le yindlela yokwakhiwa kwamacenge egazi kwimiphunga. Impawu zayo zikhupha ngaphandle kwegazi, i-pulp fast, ivakale i-dizzy okanye i-head headed, iphosakele, insizi yesifuba okanye intlungu ezuzwayo xa uthatha umoya ophefumlelweyo nokuphefumula.
I-deep vein thrombosis- Ukubunjwa kwamacangci egazi emilenzeni yakho 'emithanjeni ejulile ibonakalisa intlungu kunye nokuvuvukala kwemilenze yakho.
Umlinganiselo we testosterone cypionate
I-Testosterone cypionate dosage ifuthelwe kwezinye izinto. Zezi;
Ngaba nzima kangakanani imeko
Ezinye izifo onokuba nazo
Indlela umzimba uphendula ngayo kwi-dose yokuqala
Iifom zeziyobisi kunye namandla
Kukho iifom ezimbini zeTestosterone Cypionate okokuqala ukuba yihlobo lobudala. Isisombululo se-injection ngamandla ka-100mg / ml kunye ne-200mg / ml.
Okwesibini yi-brand Depo-testosterone ekwayifom yefayili. Itholakala kwi-100mg / ml kunye ne-200mg / ml.
Isisiseko se-hypogonadism ephambili
Imilinganiselo yokuqala yokulinganisa-Umlinganiselo oza kugqirha ugqirha uya kuxhomekeka kwisifo sakho kunye nobudala. Ngokusekelwe kwiimfuno zakho ugqirha unokukwazi ukuba yeyiphi imilinganiselo eyona nto ingcono kuwe. Unokumisela umlinganiselo we-50-400 mg nganye kwiiveki ze-2-4.
Isilinganiso sokwanda - Unokucetyiswa ngugqirha wakho ukuba unyuswe umyinge kuxhomekeke kwimpendulo yakho kwonyango, amanqanaba egazi le testosterone kunye nemiphumo emibi.
Isilinganiso esiphezulu sala mayeza siyi-400 mg injection kwi-muscle yonke intsuku ezimbini.
Umyinge wezingane (i-12-17 iminyaka)
Imilinganiselo yokuqala yokuqala - Ugqirha wakho uya kuchaza umyinge womntwana wakho kuxhomekeke kwisifo sakhe kunye nobudala bakhe. Uya kunika imithi ngokwemiqathango yakho. Ngokuqhelekileyo, unokuncoma umlinganiselo we-50-400 mg injection kwisisu sakho encinane kwiiveki ezimbini ukuya kwezine.
Ukwanda kwenani- Ugqirha unokuthatha isigqibo sokwandisa umyinge womntwana wakho ngokuxhomekeka kwimiphumo yabo emibi, impendulo kwonyango kunye namanqanaba egazi le testosterone.
Isisindo esiphezulu sokuba ujojowe kwisisu sakho kufuneka sibe yi-400 mg nganye iveki ezimbini.
Umyinge wezingane (i-0-11 iminyaka)
Uphononongo olwenziwe ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwale mayeza kubantwana abangaphantsi kweminyaka elilishumi elinesibini abazange kwenziwe.
Isisombululo sokonyango lwe-hypogonadotropic hypogonadism
Imilinganiselo yabantu abadala (iminyaka eyi-18 nangaphezulu)
Imilinganiselo yokuqala yokuqala - Idayitha yakho iyahluka ngohlobo lwakho lokuxilonga kunye nobudala. Ugqirha unokuthatha isigqibo malunga nomyinge kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Umlinganiselo we-50-400mg injection kwisisipha nganye kwiiveki ezimbini ukuya kwezine.
Ukunyuka kwezinga-Ugqirha unokucebisa ukuba ukwanda kwimiyinge kuxhomekeke kwimiphumo emibi, impendulo kwonyango kunye namanqanaba egazi le testosterone.
Isilinganisi esiphezulu se-400 mg injection kwi-muscle yakho yonke intsuku ezimbini.
Imilinganiselo yokuqala yokulinganisa-Umyinge womntwana wakho uxhomekeke ekuxilongweni kunye nobudala bawo. Ugqirha ugqiba oku kuxhomekeke kwiimfuno zomntwana wakho. Ngokuqhelekileyo, umlinganiselo kufuneka ube yi-50-400 mg injection kwi-muscle emva kweeyure ze-2-4.
Isisindo sandisa-isilinganisi somntwana wakho singaguquleka ngokwemiphumo emibi abayifumanayo, impendulo yabo kunyango kunye namanqanaba egazi le testosterone.
Isisindo esiphezulu esilungelwe kwisisu somntwana kufuneka sibe yi-400mg nganye iveki ezimbini.
Akukaqinisekiswa ukuba ngaba le myeza ikhuselekile okanye isebenza ngokufanelekileyo kubantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibini.
Ukuba usisebenzisa ukuba ukwakha imisipha iphumelele ukusebenza kwe-athletic umlinganiselo we-100-200 mg yeli lonyango ngeveki ngokwaneleyo. Emva kweeveki ezine, unako ukwandisa umyinge ngokuxhomekeke kwiziphumo ozifumanayo emzimbeni wakho okanye ngokubhekiselele kwindlela umzimba uphatha ngayo ukusetyenziswa kweziyobisi.
Ngokuqhelekileyo, i-testosterone cypionate isetyenziselwa ukulwa nemiphumo ye-T-drop effects yezinye i-steroids eziza kuthathwa ngumntu. Xa isetyenziselwa oku, iTesttosterone Cypionate 200mg-400mg yile dose.
Umjikelezo we testosterone cypionate
Ukuba unomdla wokuthatha I-testosterone Cypionate injections ngokwabo ngenjongo yokuchitha amanqamlezo kunye nesakhiwo, umjikelezo wakho kufuneka ube njengale:
I-Testosterone Cypionate Cycle kufuneka ibe yi-200mg ngeveki iveki ye1 ukuya kwiveki yeshumi elinesibini. Kodwa ke kufuneka uqaphele ukuba ukuba ubeka i-Testosterone Cypionate kunye nayiphi na enye i-steroid ngoko utshintsho lwe-dosage. Nasi isizathu?
Yonke i-steroid ine-half half-life. Kufuneka uqikelele oku phambi kokuthatha isigqibo sokubeka ezinye i-steroids. Kwakhona, kufuneka uqaphele xa uqala umjikelezo wokuxakisha ngenxa yokuba awukwazi ukuba umzimba wakho uzakuphendula njani nge-steroid enye. Ukuze ugweme iingxaki qiniseka ukuba uvavanya yonke i-steroid enikwe yona kuqala. Ungakuphepha nokusebenzisa i-steroid enye ngexesha.
Umjikelo wezithuba zomjikelo
Eli nyango lubalulekile njengokuthatha ii-steroids ngokwabo. Kungenxa yokuba, emva kokusetyenziswa kwe-Testosterone Cypionate, amandla akho omzimba wokuvelisa le hormone sele evinjelwe. Emva kokuba uyenze nge-Testosterone umjikelezo, umzimba wakho unokugandwa yi-estrogen. Kungenxa yokuba umzimba wakho uthembele kwiijoke ukuvelisa i-testosterone ngenxa yaloo ndlela iimvavanyo zikwazi ukuvelisa nantoni na.
Izilumkiso zee testosterone
Ngaphambi kokusebenzisa le mayeza, kufuneka ukwazi ukuba kwenzekani emzimbeni wakho. Kungabangela i-hypercalcemia kwizigulane ezingapheliyo. Ukuba oko kwenzeka, kufuneka uyeke ukusetyenziswa kweziyobisi ngokukhawuleza.
Gwema ukusebenzisa ixesha elide le myeza kwizilingo eziphezulu ngenxa yokuba kunokubangela iingxaki zokusongela ubomi njenge-static hepatis, i-hepatocellular carcinoma kunye ne-adenomas ye-hepatic.
Nangona kungagqitywanga, izigulane zonyango zilumkiso malunga nokusetyenziswa kwesi sigulo kuba zingabangela i-prostatic carcinoma kunye ne-prostatic hypertrophy.
I-Testosterone Cypionate inokubangela iziganeko ze-thromboembolic ezinokuthi zibonakaliswe kukuphefumula kakhulu, i-edema, nentlungu. Ukuba unokubandezeleka kule nto, yeka ukusebenzisa iyeza kunye nokujongana nemeko ngokufanelekileyo.
Kubantu abasebenzisa kakubi isi sidakamizwa, kunokubangela ukuba izifo zengqondo zengqondo kunye neentliziyo ezinamandla. E kubeni idala i-Edema, ingaba isongela ubomi kubantu abane-hepatic, i-renal and heart disease. I-Gynecomastia iyakhula.
I-benzyl yotywala esetyenzisiweyo njengendlela yokulondolozwa ibangela iziphumo ezinzulu ezifana nesifo se-gasping. Ngamaxabiso aphantsi, akunakukuchaphazela. Kwakhona, kubantu abaphilileyo abaye babambezela ukutshatyalaliswa kwintshukumo bangabandezeleka ngenxa yokuphakama okuncinci. Kungenxa yokuba ichaphazela ukukhula komzimba.
Kuthekani ukuba ndilahlekelwa umthamo okanye ukugqithisa
I-Testosterone Cypionate injections yonyango lwangexesha elide kwaye, ngoko ke, lunokubangelwa yimiphumo emibi ukuba ingathathwa ngendlela efanelekileyo.
Ukuba uthe wayeka ukuthatha izilwanyana ngokukhawuleza okanye ungayithathi kuyo yonke into kunokubangela ukuba amayeza angasebenzi kakuhle. Isizathu sokuba isilwanyana sisebenze ngokuchanekileyo, isixa esithile kufuneka sibe semzimbeni wakho ngamaxesha onke. Ukuba awuwuthathi le nyilisi, unokubandezeleka kweempawu ze testosterone.
Ukuba uyaphuthelwa umthamo okanye ungaphumeleli ukuthatha isilwanyana ngokwemiselo, kungenzeka ukuba usebenze kakuhle okanye ungaye usebenze ngokupheleleyo. Kungenxa yokuba isilwanyana sisebenza ngokuchanekileyo, isixa esithile kufuneka sibe semzimbeni rhoqo. Akufanele uthathe ukudlula kwi-bid yokumisela idilesi ephosakeleyo. Ingabangela iziphumo ezibi kakhulu. Ucebise ukuba ubize ugqirha wakho kwaye umxelele okokugqibela ujojelele i-testosterone cypionate. Uya kukunceda ufike nge-shedding schedule entsha.
Ukuba unesidumbu seTesttosterone esithetha ukuba uya kuba namazinga anobungozi ale mayeza emzimbeni wakho. Iimpawu zalo ziquka:
Ukuncipha kwinani labesilisa
Unokufumana izilungiso ezihlala ixesha elide kunexesha eliqhelekileyo
Unako ukulungiswa rhoqo
I-Gynecomastia (ukwandiswa ngokugqithisileyo kwebele)
Ukuvuvukala kunye nentlungu kwiziko lejoza
Xa ukrokra ukuba uthathe i-Testosterone Cypionate kakhulu, qhagamshelana nogqirha wakho okanye nawuphi na isikhungo sokulawula utyhefu. Ukuba iimpawu zakho zilukhuni, iya kwindlu yexakeka ngokukhawuleza.
Ungazi njani ukuba isilwanyana sisebenza -Ungafuna ukwazi ukuba unyango osebenzayo lusebenza. Uya kuphawula ukuba iimpawu ze-testosterone ephantsi ziye zanciphisa.
Ukuqapha kweTesto Cypionate
Ukuphepha ezinye iingxaki ngelixa u-Testosterone, kufuneka uxoxe nodokotela wakho ukuze akuxelele ukuba ulungele ukusebenzisa le nkunkuma. Ukuba unemibuzo, unokuhlala ubuza kugqirha wakho ukuba ufumane ukuqonda kangcono la mayeza. Ziziphi izinto omele uzixelele ugqirha wakho ngaphambi kokufumana injola ye Testosterone Cypionate?
Makugqirha ugqirha ukuba uyayifumene na le mayeza okanye nayiphi na i-allergies enokuba nayo. Ukubaluleka kwesi sigxina kukuba isilwanyana sinokuqulatha ezinye izakhi ezisebenzayo onokuzifumana.
Ugqirha kufuneka kwakhona uqaphele imbali yakho yezobugqirha, umz. Ukuba uye wafumana isifo sikashukela, i-apnea yokulala, i-prostate eyandisiweyo, umhlaza (umhlaza wesibeletho, umdlavuza webele), i-cholesterol ephezulu, iingxaki zeengtso, isibindi iingxaki, isifo, isifo senhliziyo (ezifana nokuhlaselwa intliziyo, intlungu yesifuba kunye nokungaphumeleli kwentliziyo) kunye namacenge egazi emiphakeni nasemilenzeni.
Ukuba unesifo sikashukela, le nkunkuma inganciphisa ushukela wegazi. Ukuze ube noxolo lwengqondo, qiniseka ukuba uhlola ishukela legazi rhoqo njengoko uhanjiswe kwaye uvumele ugqirha azi iziphumo. Ukuba uyaphawula nayiphi na impawu yeeshukela eziphantsi kwegazi ezifana neenyawo ezinyawo okanye izandla, utywala, umboniso ongenalwazi, ukulamba, ukugubha kwentliziyo ngokukhawuleza, ukugubha, okanye ukutshiza ngokukhawuleza kwangoko ugqirha ugqirha wakho. Ukukhusela oku, ugqirha wakho angenza utshintsho ekudleni kwakho, inkqubo yokuzilolonga, kunye nesifo seswekile.
Ukongezelela, i-Testosterone Cypionate inokuchaphazela i-cholesterol yakho ibe yandisa ingozi yomkhumbi wegazi (i-coronary disease artery) kunye neengxaki zentliziyo. Into ekhuselekileyo kukuba ugqirha ujonge amanqanaba akho e-cholesterol ngokusondeleyo.
Yazisa ugqirha wakho ukuba awukwazi ukuhamba okanye uhlale ulala embhedeni ixesha elide usebenzisa i-Testosterone Cypionate. Ukuthintela iingxaki, kufuneka ugcine i-calcium yakho yegazi rhoqo. Ukuba unokuhlinzwa ngokukhawuleza, kufuneka uxelele ugqirha wamazinyo okanye ugqirha malunga nazo zonke iziyobisi ozisebenzisayo ngeli xesha. Kufuneka iquke yonke imveliso yemifuno, engekho imithi, kunye neziyobisi zemithi.
Xa usebenzisa le nkunkuma kumntwana wakho omncinci, kufuneka uqaphele kakhulu ngenxa yokuba inokuchaphazela ukukhula kwethambo kumvimbela ukuphakama komntu omdala. Ngethuba lokunyanga, kufuneka ulandele ukukhula nophuhliso lwamathambo omntwana wakho. Ilumkiso kufuneka lithathwe xa abantu abadala bekhulile kule nkathalo kuba banomdla kakhulu kwimiphumo yaso engezantsi ukuvuvukala kweengalo nemilenze, iingxaki zesibindi / iingxaki zeprotate.
Intlungu yokuba nokuphuphuma kwesisu kukhulu kakhulu, kwaye ekubeni le nkunkuma ingathintela ukukhulelwa kwakho, uyanconywa ukuba uhlale kude nalo ukuba ulindele. Cinga ukusebenzisa iindlela ezithembekileyo zokulawulwa kokuzalwa ezifana neepilisi zolawulo lokuzalwa okanye iikhondom ukuphepha ukukhulelwa ngexesha eli liyeza. Kuthiwani ukuba kwenzeka ngengozi? Yenza ugqirha wakho azi malunga nalo ngokukhawuleza.
Akukaqinisekanga ukuba le nyilisi ingadluliselwa ngobisi lwebele. Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba inokuchaphazela ukuveliswa kweebisi ngoko kubangela ingozi kumntwana osweleyo. Ukuze ugweme nayiphi na ingozi, ungayisebenzisi le chiza ngelixa uncelisa. Kufuneka ukhangele iingcebiso zegqirha ngaphambi kokuncelisa.
Indlela yokufaka i-Testosterone Cypionate
I-self-injection inokuvakala njengomsebenzi onzima, kodwa xa uqonda ukuba yenziwe njani, uya kuqonda ukuba akufanelekanga nayiphi na inkxalabo. Ngoku ungase uzibuze; ndiqala phi? Yiba nokuzola, ukuphuza nokuphefumula. Nantsi into enokuyenza:
Qinisekisa ukuba unesilinganiso esifanelekileyo se Testosterone Cypionate- Counter hlola ukuba unesisindo esifanelekileyo sale chiza ngaphambi kokuba unike umjovo.
Yenza inaliti efanelekileyo, efanelekileyo ne-syring- Ukuba ne-Testosterone Cypionate injection; Kucetyiswa ukuba usebenzise inaliti enyumba engazange isetyenziswe ngaphambili. Soloko usebenzisa enye ecocekileyo kwaye ikhutshwe naliphi na ixesha ofuna ukuyifaka. Kufuneka ukwazi ukuba i-Testosterone Cypionate i-oily and viscous kwaye ngoko ke kufuneka usebenzise inaliti ekhudlwanayo ukulungiselela isilwanyana. Izinaliti ezinamehlo zibuhlungu ukwenzela ukuthintela oku; unokuyithatha indawo ibe yincinci enye ngexesha layo lokunika ijojo. Nceda uqaphele ukuba xa inaliti okanye i-syringe yehla, ayiyinyumba kwaye awunayo inketho ngaphandle kokuba uyilahle.
Hlanza izandla zakho ngokufanelekileyo kwaye ugqoke iiglavu eziyinyumba- Ukucocwa kwezandla ngokupheleleyo kukuthintela kwiintsholongwane, kwaye ukuba iiglavu zakho zidibanisa naziphi na izinto okanye izinto ezingenasistim, kufuneka ubeke endaweni yazo.
Yenza i-dose efanelekileyo-Ukuze wenze oku kufaka umoya ngaphakathi kwibhotile ukuphakamisa uxinzelelo lwangaphakathi lwangaphakathi. Inzuzo yale nto kukuba unokukhawuleza ukudweba le nkunkuma ngaphandle kwayo. Unokuthi ujike ibhotile kwaye ufumane umlinganiselo ochanekileyo wamayeza owufunayo.
Ngoku utshintshe inaliti encinci-Akukho mfuneko yokuzithobela intlungu ebuhlungu xa kukho into onokuyenza ukuze wenze inqubo ingenabuhlungu. Ukuqinisekisa ukuba amayeza ayichitha njengoko wenza oku, gcina inaliti-point, uphakamise kwaye ususe. Sebenzisa isandla esisigxina kwaye ubeke endaweni enomncinci. Kumele ibe yinyumba kwaye ingasetyenziswa.
Gxuma i-syringe-Xa kuziwa kwiisayunithi, nayiphi na ibhobho yomoya ephuma emzimbeni ingabangela ingxaki enkulu. Ukuqinisekisa ukuba oku kwenzekayo, kufuneka ufune. Into oyenzayo ibambe isirinji ebonayo kunye nenaliti engagqithwanga. Jonga ngokucophelela nayiphi na iibhobho zomoya ezingase zibe kwisirinji. Flick ukusuka kwicala ukuze ubenyuke phezulu. Emva kokuba uqinisekisa ukuba isilwanyana sikhupha, khuphela umoya. Ukukwazi ukuba konke ukuphuma, lindela isitshixo sesisombululo sokuphuma kwisipoti sesirinji. Qaphela xa wenza oku ukuze ugweme ukuhlahlela phantsi.
Lungisa indawo yejoyi-Le ngxube kufuneka inikezwe kwinqanaba eliphezulu ngaphandle okanye kwingingqi ephezulu yomlenze. Ezi azinjalo kuphela iindawo ezingenayo injeni, kodwa zizona ziqhelekileyo. Sebenzisa utywala obunxilisayo ukuze ususe indawo. Ngokwenza oku, iibhaktheriya azikho ndawo kwesikhumba sakho, kwaye zikhusela izifo. Ukuze ugweme ukulimaza imithwalo yegazi okanye iimbulunga, khetha indawo yejoza ephezulu kwinqanaba le-glute.
Inject- Ukubuza indlela yokufaka i-Testosterone? Yibambe isirinji esinezidakamizwa ze-90 idilesi ngaphezulu kwendawo engenayo i-injection. Ngokukhawuleza uyichukumise kwaye uyifake ngokukhawuleza. Xa ubona nayiphi na igazi ngaphakathi kwesirinji esithetha ukuba uye wenzakalisa isisu. Fumana enye indawo efanelekileyo kwaye uyijobe ngokuthe ngqo. Ukuvakalelwa kancinci okanye intlungu iyinto eqhelekileyo kodwa ukuba intlungu iba yingozi kakhulu kwaye uqhagamshelane nodokotela ngokukhawuleza.
Yinakekele indawo yejoyi emva kokuba ukhuphe inaliti. Ukwenza oku ngempumelelo, khangela ukuba ingeniso yokungena kwenaliti uze ubeke ibhola yepotton ecocekileyo. Gxotha zonke iinaliti ezisetyenzisiweyo kunye neentsimbi ngokufanelekileyo. Ukuba unamava okungaqhelekanga, ubomvu okanye ukungahambi kakuhle, qhagamshelana nodokotela ngokukhawuleza.
Kwenziwa kanjani yoGcino Testosterone Cypionate
I-Testosterone Cypionate kufuneka igcinwe kwi-20 kwi-25 degree De Celsius. Kwakhona ubeke endaweni ekukhanyeni, umswakama, kunye nobushushu. Gcina onke amayeza ngaphandle kwabantwana ukukhusela utyhefu ngokwabo. Xa isiqhamo siphelelwa yisikhathi, siphosa ngokufanelekileyo. Gwema ukutshiza phantsi kweli gama okanye ukuwuthululela phantsi kwequla njengokuba kunokungcola.
Ukupheka ukwenza i-Testosterone Cypionate nge-steroids powder
Unomdla wokwenza i-Testosterone Cypionate? Ezi zokupheka ziya kunika okukufunayo.
1. Uvavanyo lwe-Cypionate 5gram ukuguqulwa kwi-20ml kwi-250mg / ml
5gm ye-cyp yokuvavanya
1ml ye-Benzyl Utywala olingana no-5% BA
25 ml yeoli yeesame
I-18 / 20 inaliti zokulinganisa
Isihlunu se-Whatman esingunobumba
Cinga i-5 gram ye powder
Beka i powder kwi-vial
Yongeza i-BA kwi-vial
Beka ioli kwihovini uze uyitshise. Inceda ukunciphisa. Ukufudumeza ngaphezu kokufunayo ukuze ukwazi ukufumana okwaneleyo kwi-pan.
Yongeza ioli kwi-vial uze ulondoloze i-2ml kamva. Hlanganisa iwayini ngokucokisekileyo.
Unokutshisa umxube ukuba uthanda. Ungayifaka kwi-pan yokucima okanye iso lesitofu.
Thatha i-18 okanye i-20 inaliti yokulinganisa kwaye uyibeke kwisibilini esingumkhombe. Kwakhona, qhafaza isihlunu se-Whatman oyinyumba.
Ukuze ukhulule uxinzelelo, faka enye inaliti kwisitya esinyumba.
Ukusebenzisa isirinji ukukhupha isisombululo uze usebenze ngokusebenzisa isihlungi se-Whatman.
Thatha i-2ml yeoli eyayisinye isirinji kwaye usebenzise i-Whatman kwisisombululo.
2. I-Cypionate yovavanyo 10 ukuguqulwa kwegram 40 ml kwi-250mg / ml
5 ml yeoli yeesame
2ml ye-Benzyl Utywala = 5% BA
I-10 gram ye-cyp yokuvavanya
I-3cc kunye ne-5 / 10x syringes
3. 60ml kwi-250mg nge ml
8 ml ye-5% BA
I-7 milliliter yeoli echitshiweyo
I-15 gram yePower Cypionate Powder
4. 250 ml kwi-80mg nge ml
185 ml yeoli edibeneyo
45mls zeBenzyl Benzoate
5ml ye-Benzyl Utywala
I-20 grams ye-Testosterone Cyp Powder
250 ml kwi-200mg nge ml
5ml yeoli yembewu yamagilebhisi
45 ml yeBenzyl Benzoate
50g ye-Testosterone cyp Powder
5. 100ml kwi-250mg nge ml
I-25 ml yeoli yembewu yamagilebhisi
2ml ye-Benzyl Utywala
75 ml we-25g I-Testosterone cyp Powder
Indlela yokugqiba i-Testosterone Cypionate kwi-powder steroid eluhlaza
Ungaqwalasela ukuthenga i-steroids ipowder eluhlaza kwaye wenze iTesttosterone eqedileyo. Siya kukufundisa indlela yokwenza i-testosterone Cypionate powder.
I-milliliter nganye ye-100 mg nganye yesil isisombululo iqulethe:
100 mg we Testosterone Cypionate powder
I-1 milliliter yeBenzyl benzoate
I-736 mg yeoli yeCotton
I-45 mg ye-Benzyl yotywala
Isilinganisi sedijithali esinokulinganisa i-0.01g
Isihlungi se-syringe esiyinyumba 22um
Iglasi elingenakunqatha I-Vial eyobukhulu bayo
Isalathiso naluphi na ubukhulu
Isinyathelo sokuqala kukulinganisa i-Testosterone Cypionate efunekayo kwaye uyibeke kwi-beaker yeglasi. Yongeza i-Benzyl Benzoate kunye ne-Benzyl Alcohol.
Iisombululo ziqala ukutshabalalisa i powder kodwa kodwa ukuba ufuna ukukhawulezisa inkqubo, unokusebenzisa ibhedi yamanzi. Beka i-vial ibe ngamanzi amaninzi epanini okanye nayiphi na indawo efanelekileyo. Ungasebenzisi amanzi atshisayo kakhulu ngenxa yokuba ezinye iimveliso zingakhupha. Ioli ephethe izinto ozimisele ukuyisebenzisa kufuneka ibe neqondo elifanayo njengesisombululo ke ukuba unquma ukufudumala isisombululo ke kufuneka ioli ephetheyo ifudumele. Isizathu sokwenza oku kukuqinisekisa ukuba yonke i powder ichithwa kwiisombululo. Qinisekisa ukuba akukho powder ebonakalayo esele emva kwesisombululo.
Thatha ioli yekotoni efudumeleyo kwisisombululo. Hlanganisa ngokufanelekileyo kwaye uqinisekise ukuba akukho i-hormone ye-swirls kwaye ukuba kwenzeka ntoni, thabatha isisombululo kude nokuhlamba amanzi uze ufike kwinkqubo yokucoca.
Isinyathelo esilandelayo usebenzisa isirinji ukuze ulungise izisombululo ozakuzisebenzisa ukucoca ngazo. Unokusebenzisa i-syringe enkulu kanye okanye isirinji encinane kaninzi. Susa isihlunu se-0.22 se-sterile engunobumba kwaye ugxothise inaliti eluhlaza kwinqanaba elingaphantsi uze ufake i-syringe.
Sebenzisa i-swab yotywala ukuze usule inxalenye engaphezulu yesitya esinyumba. Faka inaliti eluhlaza kuyo kwaye ubeke inaliti ibambelele kwisihlungi sesirinji kwisibilini.
Ngamanye amaxesha unokufumanisa ukuba icebo lingahluthwa okanye inkqubo inganciphisa. Kule meko, unokwenza indawo yokucoca kunye nomnye ukugcina ixesha. Uhlobo kunye nemali ye-steroid powder oyisebenzisayo yintoni eyenza inani elithatyathwa yinkqubo.
Imveliso ilungele ukuyisebenzisa emva kokucoca umkhiqizo kwi-vial stal.
Uhlolo lokuhlola lweTestrosterone Cypionate
Ngaba uvile ngeTesttosterone Cypionate? Eli bhanki lingcono kakhulu kwaye ukuba awukwenziwanga ngengqondo yakho, unokucinga ngokufunda ezi zilandelayo zibuyekezo.
U Yuan uthi "Ukususela ekubeni ndiqalise le nyango kunyaka odlulileyo, ndibone ukuzuza okukhulu kwi-gym. I-abs engekho ebonakalayo kwaye oku kuye kwandenza ndithande ukuzivocavoca ngakumbi ".
Uthi uLi uthi akalokothi athengise ukuya kwindawo yokuzivocavoca. Unako ukuhamba ukuqhuba umsebenzi rhoqo imihla ngaphandle kokuba inja ithathele. Yonke imihla emva komsebenzi uya kwi-gym kwaye wenza umsebenzi ogqithiseleyo naliphi na ixesha eliva ngayo.
U-Chen uye wangena kwi-200 mg nganye kwiiveki ezimbini ukususela ekubeni ugqirha wayibeke. Uthi "Kuze kube ngoku ndihamba ngendlela efanelekileyo ekufumaneni isisipha nokulahlekelwa ngumzimba. Ndiyabulela kule nkunkuma, ngoku ndivakalelwa njengendoda ".
Intengo yeCytosterone Cypionate
Ngoku ukuba uyazi ukuba le mveliso inokwenzela ntoni, ungafuna ukwazi ixabiso leTestrosterone Cypionate. Ngoko ixabiso leTesttosterone Cypionate libiza njani? Kuxhomekeke kubukhulu obufunayo kunye nesilinganiso sakho.
Iyakwazi ukuhluka kwiivenkile ezahlukeneyo kuxhomekeke kwindawo.
Indlela yokuthenga i-Testosterone Cypionate online
Unokuthenga i-Testosterone Cypionate ngokuqhosha komgca. Iza neenzuzo ezininzi kuquka ukulula. Nantsi into enokuyenza;
Khangela i-AASraw.com iwebhusayithi
Khangela igama elithi "testosterone cypionate."
Gcwalisa ifom yesicelo ekuthengeni uze uyithumele. Kuya kubandakanya ubungakanani kunye nendawo yakho.
Unokufuneka ukuba ugcwalise umbuzo wezonyango ogqithisileyo ukuze ugqibe ukufaneleka kwakho ukuthenga loo mveliso. Ungakwazi ukuwuzalisa ngokukhawuleza kwaye ungenise. Iingcali zethu ziya kuwuphonononga kwaye mhlawumbi zamkele umyalelo wakho.
Xa umyalelo wakho usamkelekile, ngoku ungenza inkokhelo usebenzisa iindlela ezifanelekileyo kakhulu, kwaye emva kokuba uzalisekile, iimpahla zithunyelwa ngokukhawuleza. Indawo yakho iya kugqiba inani lexesha ezi zinto ziya kuhamba.
Inyaniso, ukuba ufuna ukwenza utshintsho eluhambweni lwakho lokwakha umzimba, le nto ingqinelana nayo. Awusoze wazisola ngokukhetha le ndlela kuba iingeniso zingenakubalwa. Unokuyeka ukukhangela enye i-steroid ngenxa yokuba sele ufumene umntu onamandla akhe angenakulungiswa kwimarike.
Yintoni enye ongayidla nantoni na oyithandayo ngaphandle kokwesaba ukugcinwa kweoli. Umzimba wakho uya kuguqulwa, kwaye uya kufezekisa ubunzima bakho bomzimba. Uya kufuneka kwakhona uqeqesho oluthile ukuze uthole umzimba ohlala uwamthanda.
Asikho isidingo sokukhathazeka malunga nokubuyiswa kwakho emva kokuvavanya. Kungenxa yokuba le mveliso iza kunyusa ukubola kwe-nitrogen kunye neprotheni synthesis. Kwakhona, uya kufumana iinjongo ezingakumbi, kwaye ukuba le nto yinkathazo kuwe, ngoku unakho konke ukukhangela ukuqalisa ukuqeqesha kwakho kwakhona.
I-Testosterone Cypionate ayithembisi ukukwenza ube mnandi, kodwa iya kukukunceda ufezekise iinjongo zomzimba eziza kukunceda uzuze amanye amajelo kunye namagosa.
Kwimashishini ethu, siyaqesha abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo. Amava olwazi, uqeqesho olugqwesileyo, kunye nokusebenza okumangalisayo okubangela ukuba baphumelele. Njengesiko, sibheke phambili ekukhuthazeni uphuhliso lwabo ngokuqeqesha rhoqo. Sinika kwakhona izixhobo ezaneleyo zonxibelelwano ukwenzela ukwandisa ukuziphatha kwabo, ukuzinikela kunye nokusebenza kakuhle.
Sinikela ngemveliso enobungakanani kumgangatho okhuphisana kakhulu. Iimveliso zethu zicocekile, kwaye unokuqiniseka ukuba ukusebenza kwazo kungabikho. Yenzelwa ukuba sinokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kuzo zonke iinkqubo zethu zokuvelisa. Ngexesha lemveliso, siyahambisana nayo yonke imimiselo kunye nokuhlolwa kwekhwalithi ukuqinisekisa ukuba sinika iimveliso ezanelisa iimfuno zabaxhasi bethu.
Senza yonke inzame ukugcina indawo yethu ihlambulukile ngokuqinisekisa ukuba imisebenzi esenzayo ayikuchaphazeli kakubi. Ekugqibeleni, abathengi bethu bangumqolo wethu. Inkonzo yabathengi yethu iyaphendula kwaye iphulaphula bonke abaxhasi. Enye into ehluke ngayo kwabanye ababoneleli ngenkonzo kukuba sithatha ingqalelo kubathengi. Yiba isikhalazo okanye isincomo; lakho ilizwi liyakwamukelwa njalo.
Umyalelo ovela kuthi namhlanje kunye namava ethu enkonzo. Awuyi kufumana kuphela iimveliso zakho ngokukhawuleza kodwa baya kufumana umsebenzi.
Iimigaqo kunye nokusebenza kwe-Endocrinology kunye neMetabolism, ehlelwe nguKenneth L. Becker iphepha 1189-1893
I-Testosterone: Isenzo, ukusilela, ukufakwa endaweni, ehleliwe ngu-E. Nieschlag, i-HM Behre 272-317
UWilliam Umbhalo we-endocrinology, nguShlomo Melmed, uKenneth S. Polonsky, uP. Reed Larsen, uHenry M. Kronenberg, iphepha 758-766
I-7 Best Nootropics (SmartDrugs) kwimarike yeSunifiram Izinto ze-10 ozimele wazi ngaphambi kokuba uthathe i-DMAA
Aasraw on I-N-Boc-dolaproine (120205-50-7)
Aasraw on Alprostadil, (PGE1), iProstaglandin E1
Copyright © 2019 aasraw Wonke amalungelo agcinwe. Eyilwe ngu www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com